Malaysia disassociates itself from ASEAN statement on Myanmar's Rakhine state - Myanmar News - Mingalapar Forum
Started by BurmeseNews , Sep 25 2017 02:19 AM
Malaysia on Sunday (Sep 24) said it "would like to disassociate itself" fromastatement issued by the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) on the situation in Myanmar's Rakhine state.
The ASEAN Chairman's statement condemned the Aug 25 attacks against Myanmar security forces, as well as "all acts of violence which resulted in loss of civilian lives, destruction of homes and displacement of large numbers of people".
However Malaysia's Minister of Foreign Affairs Anifah Aman said inaseparate statement on Sunday that the country felt that the ASEAN statement wasa"misrepresentation of the reality of the situation".
စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အာဆီယံရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်သဘောထား အပေါ်မှာ မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ သဘောထားကွဲပြားတယ်လို့ မလေးရှားက ဆိုပါတယ်။
အာဆီယံရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တွင် သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြမ်းဖက်မှုနှင့် လူအများအားထိခိုက်စေသော လုပ်ရပ်အားလုံးအား ခြုံငုံ ရှုပ်ချခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာ တကယ့်အဖြစ်အပျက်အပေါ် မှားယွင်းတဲ့ သုံးသပ်မှုသာ ဖြစ်တယ်လို့ မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက သီးခြားထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
Read more at http://www.channelne...anmar-s-9246494
Also tagged with one or more of these keywords: Malaysia, ASEAN
Myanmar lifts worker ban to Malaysia
Started by BurmeseNews , 11 Jan 2018 workers, lift, Malaysia
Malaysia's Petronas asked to exit Myanmar in protest of Rakhine crisis
Started by BurmeseNews , 09 Nov 2017 malaysia